Iyada oo lacagta badani Qalabka telefoonada gacanta la awoodaha multimedia, waa in mid lala yaabo ku jirin in kuwan Qalabka telefoonada gacanta awood u duuban iyo kaydinta muujinaya telefishanka iyo filimaanta. Arinta ilaa hadda waxa uu ahaa in si loo baahin downloads television ah ama qalab kale oo mobile ah (sida kiniin a) gal aad loo baahan yahay in ay dhex maraan tallaabooyin ballaaran ama xitaa soo bixi warbaahinta.
Chromecast kuu ogolaanaya in aad sii qulquli aad downloads on qalab badan oo aan ka walwalayn ku saabsan dhammaan Cawaysimina idinkoo ah.
Qeybta 1: shuruudaha Chromecast
Qeybta 2: talaabo A hagitaan talaabo talaabo si deg deg ah u qotomiyo Chromecast
Qeybta 3: 10 wax qabow aad qaban karto Chromecast
Qeybta 4: Maxaad aan la Chromecast samayn kartaa
Qeybta 5: Chrome ama aan si Chrome
Sida aad la soco doonaa, cusub ee aad processor waa tayada fiican aad geeyo noqon doonaa. Wixii television waxaad u baahan tahay in ay awoodaan in ay ku xidhmaan qalabka si aad telefishanka ama xidhiidh wifi si ay u helaan qalab Chromecast ah. Ayaa ka fiican aad Wi-Fi fiican u qabadka noqon doonaa.
Helitaanka aad videos hoorto si toos ah u aad television qalab mobile waa sida ugu fudud ee 1,2,3. Si kastaba ha ahaatee, waxaan doonayaa in aan hubiyo in wax walba waad og si aynu dib u eegaan in hadda.
Tallaabada 1 - Waa in aad iibsato qalab Chromecast ah. Tani waa $ 35 maalgashiga iyo waxaa laga heli karaa http://www.google.com/intl/en/chrome/devices/chromecast/
Tallaabada 2 - lifaaq aad Chromcast inay xiriir la mid ah Wi-Fi sida telefishanka. Tan iyo markii dadku ugu yeelan ah-sanduuqa x ama Wii la Wi-Fi aad u samayn karaa halkan. Haddii aad telefishan leedahay in uu leeyahay inuu toos u galo Wi-Fi markaas furaysto Chromcast si toos ah mid ka mid ah dekadaha USB ah gelin.
Talaabada 3 - aad u fur app Chromecast ama haddii aad rabto in aad sii qulquli live furo xisaab YouTube iyo falgali in video ah oo uu u ciyaaro.
Fiiro Gaar ah: Waa in si fudud. Maskaxda ku hay in aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa in ay u hubiyaan in aad leedahay Chrome Google app lagu rakibay qalab aad. Haddii aadan haysan Google Chrome app fudud booqo www.google.com oo nooca in Chromecast App si aad u bilowdo.
Qeybta 3: 10 wax Cool aad qaban karto Chromecast
1. View iyo share videos on qalabka kala duwan iyo dhufto oo aan haysan si ay u abuuraan xisaab badan. Haddii aad qabto smartphone ama kiniin Apple la helaan internet, waxaad ku xidhi kartaa si aad Chromecast.
2. Access waxaa meel kasta. Sababo la xiriira dabeecadda daruur qalabka waxaad ku geli kartaa videos aan u baahnayn inay ka welwelina lugging agagaarka files.
3. Stream YouTube aan u baahan ee xilkan ka mid ah qalab aad iyo app kale.
4. television aan kijinka weyn ee la xidhiidha qalabka ugu. Qalabka wuxuu u yar oo ka dhigaysa shaqo weyn oo aan aruuray weyn.
5. Access filimada iyo music labadaba. Chromecast bixisaa helitaanka YouTube, Netflix, Pandora iyo google play.
6. La soco filimada aad meel kasta. Si ka duwan satellite toos ah oo saxan, Chrome kabka ka bixisaa oo aad ka heli meel kasta oo aad ka heli kartaa xidhiidh ah.
7. daawashada filimaanta adiga oo aan awood ka qalab aad nuugo. Xadhig wuxuu awood u Timid Chromecast kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhawrto qalabka ku shaqeeya oo aan wax ka nolol batteriga qalabka aad ka. Tani waxay muhiim u yahay qalabka sida laptops iyo murriyado, taas oo ay ugu batari ku tiirsan yihiin iyo daadi dhakhso leh barnaamijyada naqshadeynta waxqabadka sare iyo.
8. Ma waxaa laga helaa hal guri. Halkee saxan iyo satellite waa xannibaad ah in isku guri (in kasta oo laga yaabo in aad galaangal u leeyihiin qolal kala duwan oo dhowr ah), mana bixiyaan miday ee Chromecast oo aad bixisaa marin buuxa u hesho xisaabtaada eegin guriga oo aad ku sugan tahay. Inta aad waxay leeyihiin qalab aad u isticmaali kartaa.
9. Waxaad la xiriiri kartaa on your tv la qalab mobile. Mid aad u fiican. No raadinaya fog ah.
10. leexo qalab kasta oo android galay qalab kale chromecast. Haddii aad qabto app ku saabsan laptop, telefoonada, kiniiniga, telefishanka, iwm aad u hagaagsan karaan qalabka aad by helitaanka aad app xisaabta. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo aad isticmaali kartaa adiga oo dab ugu shidin si ay u isticmaalaan Chomecast.
Qeybta 4: Waa maxay aadan sameyn karin
Chromecast markan uma oggolaan doono in aad si ay u helaan Lugood qalabka ilaaliyo. Tani waa si loo yareeyo burcad badeeda. Midkoodna ma aad heli karin shabakadaha P2P sida FrostWire ama napster soo bixi filimada aad. Sidoo kale, maskaxda ku hay in heesaha oo aan ku mp3 ama qaab mp4 ma ciyaari laga yaabaa in qalabka. Haddaba tanu waa dadaal lagu doonayo in la joojiyo burcad badeeda.
Wixii maalgelinta, Chromecast waadax ah oo qiimihiisu yahay $ 35 ah. Yaryar iyo fududahay in la isticmaalo qalab uu hore u qaaday jawaab waaweyn wanaagsan. Halkee qalabka beddel uma aha, waayo, cable, satellite, ama saxan ayey siiyaan hab riqiis ah oo wax ku ool ah oo si aad u daawato bandhigyada aad ugu jeceshahay meel kasta waxaa jira Wi-Fi iyo helitaanka daruur.
> Resource > Video > Sida loo Setup iyo Isticmaalka Chromecast